musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Hurumende itsva yeGermany kunyoresa mbanje zviri pamutemo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Entertainment • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hurumende itsva yeGermany ichabvumira kushandiswa kwembanje zviri pamutemo
Chibvumirano chehurumende yemubatanidzwa pakati peSocial Democrats, Free Democrats neGreens chinosanganisira zvisungo zvekurambidza kushandiswa kwembanje.
Maererano nemishumo yazvino, hurumende itsva yemubatanidzwa ye Jerimani ichamisa hurongwa hwe 'inodzorwa kugovera cannabis kune vakuru' ye 'kunakidzwa kushandiswa' kuburikidza nezvitoro zvine rezinesi.
Maererano nezvinyorwa zvegwaro rakatorwa ne German nhau, chibvumirano chehurumende yemubatanidzwa pakati peSocial Democrats, Free Democrats neGreens chinosanganisira zvisungo zvekurambidza kushandiswa kwembanje.
"Mubatanidzwa unoda kuisa kudzora kwakasimba kwechigadzirwa kuti ive nechokwadi chemhando uye 'kuchengetedzwa kwevadiki," chibvumirano chinodaro.
Gadziriro yekunyoresa nhandaro zviri pamutemo Cannabis yakaburitswa svondo rapfuura German media nezvinyorwa mumapato ese ari matatu. Mushonga mbanje yanga iri pamutemo muEuropean Union kubvira 2017.
Dunhu rekupedzisira rehurukuro dzemubatanidzwa wematatu rakaitwa muBerlin. Social Democrat Olaf Scholz anofanirwa kutora chigaro chechancellor, achitsiva mutungamiri weGerman, Angela Merkel, uyo asina kuda kukwikwidza zvakare.
Bato raMerkel reChristian Democratic Union (CDU) nevanodyidzana navo kubva kuChristian Social Union muBavaria (CSU) vakaratidza kusaita zvakanaka musarudzo dzemunaGunyana, ukuwo bato raScholz rakawana zvibodzwa zvikuru. Bato repakati-kuruboshwe reSocial Democratic Party (SPD) rakada kushamwaridzana nerekuruboshwe reGreens neFree Democrats (FDP) pane kutsvaga mutsva, unonzi 'Grand Coalition' neChristian Democrats.